Mgbasa ozi envelopu nke Mapama bidoro ibuso unwu ala | Netwọk Mgbasa Ozi
N'iburu ọnọdụ ụkọ mmiri na Spain na-ata ahụhụ, Mịnịstrị na-ahụ maka ọrụ ugbo na ịkụ azụ, nri na gburugburu ebe obibi amalitela mkpọsa a na Tuesday «Mmiri na-enye anyị ndụ. Ka anyị lekọta ya », ebum n’uche inwe ike ime ka ndị mmadụ mata mkpa ọ dị ichekwa mmiri n’obere mmiri ozuzo a na-atụ anya ya n’afọ.
Want chọrọ ịma ka oge ọkọchị dị?
1 «Mmiri na-enye anyị ndụ. Ka anyị lekọta ya »
2 Ilekọta mmiri bụ ọrụ dịịrị anyị
3 Atụmatụ ụkọ mmiri ozuzo
«Mmiri na-enye anyị ndụ. Ka anyị lekọta ya »
Ebumnuche nke iji mmiri mee ihe ọfụma n'agbanyeghị ọnọdụ ọkọchị Spain na-eche ihu, mkpọsa mmụta gburugburu ebe obibi "Mmiri na-enye anyị ndụ. Ka anyị lekọta ya.
Mmiri ọ bụ akụ dị oke ọnụ maka ndụ na mbara ala na, n'ezie, maka mmepe nke mmadụ. N’ụzọ dị mwute, oke mmiri dị na peninshula na-ebelata n’ihi mbelata mmiri ozuzo na mmụba nke okpomọkụ. Ihe ndị a bụ ihe abụọ ị ga-eburu n'uche, ebe ọ bụ na ọ bụghị naanị na mmiri anaghị ezo, kamakwa ọtụtụ mmiri na-amịkọrọ.
N'agbanyeghị ebili mmiri na ihu ihu gafere na Spain, mmiri anyị na-echegbu onwe anyị, n'ihi ya, anyị enweghị ike wedata nche anyị.
Afọ ikpeazụ ọmụmụ mmiri, n'etiti Ọktoba 1, 2016 na Septemba 30, 2017, abụwo, dị ka Mlọ Ọrụ Ihu Igwe nke Obodo (Aemet) si kwuo, nke asatọ driest kemgbe 1981.
Afọ ọmụmụ mmiri bidoro na Ọktọba 1, 2017 na, dịka data Aemet si kwuo, mmiri ozuzo nke gbakọtara na oge n'etiti Ọktoba 1 na Disemba 31 bụ 43% dị ala karịa ụkpụrụ mmiri ozuzo nkịtị a na-edekọ kwa afọ.
Ya mere, ọ dị mkpa ịmara na anyị ga na-eji mmiri eme ihe nke ọma ka ịghara ihichapụ ọtụtụ lita n'ọrụ anyị.
A na-atụlekarị ọdịda site na afọ kalenda, ya bụ, site na Jenụwarị ruo Disemba. N’ụzọ dị otu a, afọ 2017 agwụla afọ nke abụọ kpọrọ nkụ kemgbe 1965, na-eburu n'uche na mpaghara ụfọdụ nke Spain na-eche ihu ụkọ mmiri n'afọ nke ise.
Ilekọta mmiri bụ ọrụ dịịrị anyị
A ga-emepe mkpọsa nke Mapama wepụtara na telivishọn, ederede ederede, ịntanetị, netwọk mmekọrịta yana na oghere ọha. Ebe ọ bụ na ndị mmadụ na-eji mmiri eme ihe kwa ụbọchị, ọ bụ ọrụ dịịrị anyị iji ya nke ọma ma mụta otu esi echekwa mmiri. Ha bụ obere mmegharị ahụ dị ka imechi pọmpụ mgbe anaghị eji ya, ịgbara mmiri oge ụfọdụ mgbe anwụ anaghị ewepụ mmiri, jiri olulu mmiri na-agba okpukpu abụọ, ịchịkwa mmiri ejiri mmiri, wdg. Ndị na-eme ihe dị iche na mkpokọta mmiri nke ndị Spen, ebe ọ bụ na, ọ bụ ezie na ọkwa nke ọ bụla anaghị eme nnukwu ihe, anyị karịrị mmadụ 48 nde bi.
Mgbe ị na-eji ngwa dịka igwe ịsa ahụ, ọ dị mkpa iji ha mgbe ha zuru ezu, dịka ọ ga-enyere anyị aka chekwaa ihe karịrị lita 3.000 kwa ọnwa. Idozi ntapu site na ọkpọkọ na-eme ka anyị tufuo ihe karịrị lita 30 kwa ụbọchị. Ya mere, na-eburu n'uche ọnụ ọgụgụ ndị a niile na mmiri oriri, mkpọsa ahụ na-echetara anyị na mmiri dị oke mkpa na mbara ala na ọ bụ ya kpatara inye anyị ndụ, ya mere, ọ dị mkpa ilekọta ya ma mara otu esi echekwa.
Atụmatụ ụkọ mmiri ozuzo
N’igbanyere ọnọdụ ụkọ mmiri, Mịnịstrị na-ahụ maka ọrụ ugbo na ịkụ azụ, nri na gburugburu ebe obibi emeela ihe dị iche iche iji belata mmetụta ya, yana atụmatụ emere n’afọ ndị a mere ka enwee ike izere mmachi na nsonaazụ ndị mmadụ.
Mgbe ụkọ mmiri ogologo oge dapụtara na mba, Atụmatụ ọkọchị na-ehiwe. Na Spen, akwadoro Atụmatụ Ọkọchị a na 2007 ma na-enyocha ya. Atụmatụ ndị a na-eme usoro iwu maka ime ihe n'agbanyeghị ọnọdụ ụkọ nke mmiri na-adabere na atụmanya na okike nke atumatu maka omume nchịkwa nke nchịkwa mmiri.
Ebumnuche a iji belata mmetụta gburugburu ebe obibi, akụ na ụba na mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke na-ebute ọnọdụ ọkọchị dị ka nke a na-ata ahụhụ na Spain.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Oké ọkọchị » Mgbasa ozi nke Mapama malitere iji buso unwu agha
Afọ 2017 bụ otu n'ime ihe kachasị ọkụ na nkụ na akụkọ ntolite